Oke Osimiri Atlantic: njirimara, mkpa, ihu igwe, ahịhịa na osisi | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke Osimiri Atlantik
El osimiri atlantic ọ bụ mmiri mmiri nwere nnukwu osimiri n’ụwa. O nwere otutu umu anumanu na osisi n'ime ya. Ọ na-asacha n'ụsọ osimiri ọtụtụ mba na ọtụtụ kọntinent. Mpaghara ya dị ihe dịka square kilomita 106.4. Mgbatị a nwere otu ụzọ n'ụzọ ise nke ụwa dum. Mkpa oke osimiri a dị oke elu maka mmadụ na ndị ọzọ dị ndụ bi n’ime ya. Ya mere, anyị ga-enyefe gị isiokwu a n'ụzọ miri emi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe niile metụtara Atlantic Ocean, lee, anyị ga-akọwara gị ya nke ọma.
2 Enyemaka na ihu igwe
4 Mkpa nke oke osimiri Atlantic
Oké osimiri a nwere ọdịdị nke efere elongated na S. Ọ na-esite na Eurasia, Africa ruo n'ebe ọwụwa anyanwụ na America ruo n'ebe ọdịda anyanwụ. Ọ na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 17% nke elu ụwa dum. Amara ya maka oke osimiri kacha mma n'ụwa. Ọ nwere ebe okpomọkụ na ebe dị elu dị elu n'ihi oke okpomọkụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ya niile, nkezi omimi bụ ihe dị ka mita 3.339. O nwere olu nke mmiri cubic kilomita 354.700.000. Dịkarị, mmiri kacha atọ ụtọ dị na mpaghara ogo iri abụọ na ise ugwu na mpaghara ndịda. N'aka nke ọzọ, anyị na-achọta ebe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ ebe okpomọkụ dị elu, ọnụego dị elu nke evaporation na ọnụ ahịa ya. Na mgbakwunye, na mpaghara ndị a ebe mmiri na-amịpụ ukwuu, a na-enwekarị ntakịrị mmiri ozuzo. N'ebe ugwu nke ikuku, ebe a na-ahụkarị salinity dị ala, ebe ọ bụ na ọnụego evaporation dị ala.
Banyere ọnọdụ okpomọkụ ya, ọ dịgasị iche dabere na ohere nke anyị nọ na ya. Ka ọ dị na mbụ, dị na ogo 2, ma enwere akụkụ ebe ọ dị karịa na ndị ọzọ ebe ọ dị obere. Na mpaghara polar ma ọ bụ dị nso ha, ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri, karịsịa n'elu, dị ala, ebe na mpaghara ebe okpomọkụ ka ha dị elu.
Enyemaka na ihu igwe
Na oge nke August na November, na Oke Osimiri Atlantic oke ifufe malitere. Nke a bụ n'ihi ịrị elu nke nnukwu akụkụ nke ikuku na-ekpo ọkụ nke dị n'elu ya na ụdi ya na-esochi ya mgbe ọ na-ezute ọtụtụ igwe ikuku oyi. Oké ifufe ahụ na-eri mmiri n'onwe ya ruo mgbe ọ ga-agbasa n'elu ụwa, ebe ike na-efunahụ ya. Nke nta nke nta ọ na-aghọ oké ifufe mmiri, ruo mgbe ọ ga-emesị pụọ n'anya. Dịkarị, ajọ ifufe na-etolite n'ụsọ osimiri Africa ma kwaga n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Oke Osimiri Caribbean.
Na ogologo ụzọ, Oké osimiri a nwere oke mmiri dị larịị. Agbanyeghị, ọ nwere ụfọdụ ugwu, ndakpọ ahụ, ala dị larịị na ọwa mmiri. Ihe kachasị baa ụba bụ ala dị larịị ebe ụfọdụ ụdị dị iche iche na-emegharịkarị gburugburu ebe obibi. Otu n'ime ugwu a kacha mara amara bụ Mid-Atlantic. Ọ gbasara site n’ebe ugwu Iceland ruo 58 ogo ndịda latitude. Ugwu a nwere obosara nke ihe dị ka 1.600 km.
Oke Osimiri Atlantic kewara site na mpaghara ihu igwe nke na-adaberekarị na latitude ebe anyị nọ. Ọnọdụ ihu igwe kachasị mma bụ ndị dị na Atlantic north of equator. Ọ bụ ezie na ebe ndị oyi na-atụ bụ n’ebe ugwu dịkarịsịrị ebe oke osimiri kpuchitere ice.
na Oke Osimiri ndị nọ n'Oké Osimiri Atlantic na-enyere aka ịchịkwa ihu igwe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa. Nke a bụ n'ihi na ọ na-ebuga mmiri ahụ na-ekpo ọkụ na mmiri oyi na mpaghara ndị ọzọ iji nwee ike kesaa ha nke ọma. Ọ bụrụ na onye na-ebu eriri a agbaji, ikuku ụwa ga-ata ahụhụ mmebi a na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Enwere ọtụtụ okwu nke a akpụrụ Age.
Oké osimiri ndị a na-emetụta ikuku gburugburu ma ọ bụ na-ekpo ọkụ mgbe ọ na-efe n'oké osimiri a. Ifufe, mgbe ọ na-ebugharị iru mmiri na ikuku na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi, Ọ na - arụ ọrụ dị ka ihe na - achịkwa ihe na - eme ka ihe dị mma na ike.
Na-amalite site na anụmanụ, anyị na-ahụ oke osimiri nke nwere ọtụtụ anụmanụ dị n'okirikiri mmiri. Anyị na-achọta ma vertebrates na invertebrates. N'ime anụmanụ nwere oke nkesa na oke osimiri a anyị nwere:
Nnukwu ọcha shark
Igwe mmiri na akpụkpọ anụ
Orca ma ọ bụ egbu egbu whale
N'aka nke ozo, anyi nwere nde osisi di iche-iche. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha na-ebi n'elu ma ọ bụ n'akụkụ ala, ebe ọ bụ na ha chọrọ ìhè anyanwụ iji mepụta fotoynthesis. N'ime oke osimiri, enwere mgbanwe dị oke mkpa iji buru n'uche maka ịdị ndụ nke ahịhịa. Ọ bụ banyere irradiance. Mgbanwe a bụ ihe na-atụle ọnụọgụ nke radieshon nke metụtara osisi. Bara oke ime, anyị na-ahụ obere ọnụọgụ nke radieshon nke na-emetụta osisi. N'ụzọ dị otú a, photosynthesis enweghị ike ime na osisi anaghị adị ndụ. Mgbanwe a na-emetụtakwa oke turbidity nke mmiri. Na turbid ma ọ bụ mmiri na-akpụ akpụ nke na-ebu irighiri apịtị, ọnụọgụ nke ìhè anyanwụ nke na-abanye dị obere, yabụ osisi ga-ata ahụhụ karịa.
Anyị nwekwara ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke osisi na ndabere. Ha nwere ike ịlanarị nke ọma ka ha na-ese n'elu mmiri na mmiri. Anyị nwekwara ụdị ahịhịa mmiri, phytoplankton ma ọ bụ ahịhịa mmiri. Nke a phytoplankton bụ ụdị osisi dị mkpa na-eri nri maka ọtụtụ nde azụ na anụmanụ ndị ọzọ dị na mmiri.. Na mpaghara Caribbean, a na-ahụkarị coral reef. Ihe ndị a na-emebi nke ọma site na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe.
Mkpa nke oke osimiri Atlantic
Oke osimiri a dị oke mkpa maka ịbụ ụzọ nkwukọrịta n'etiti kọntinenti. Ọ nwere ihe dị mkpa nkwụnye ego nke mmanụ na gas, sedimentary nkume nke dị na shelf ụwa na nweta nnukwu akụrụngwa ịkụ azụ. A na-esikwa na ya wepụta ụfọdụ nkume dị oke ọnụ. Na mmanu mmanu, ị na-echegbu onwe gị maka ọdịnihu gị banyere mma mmiri gị.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Atlantic Ocean na njirimara ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Atlantik